> Resource > Android > Sidee inuu ka soo kabsado Xiriirada tirtiray ka HTC EVO 4G
Ma fahmi karaa sida ay u soo kaban xiriirada tirtiray ka HTC EVO 4G!
Anigu ma fahmi karaa sida ay u soo kaban xiriirada aan ku HTC EVO 4G ka dib markii si qalad ah la tirtiro qaar ka mid ah (oo aan ahayn oo dhan). Waxaan ku xiran oo aan telefoonka si aan computer iyo abaabulay xiriir la Manager HTC nidaameed. Waxaan isku dayay in la tirtiro shayga Ma aanan rabin, laakiin markii aan hubiyaa aan telefoonka, a xiriir dhowr oo muhiim ah oo aan telefoonka la waayay. Markaas ayaan hubiyaa aan computer u hayaan, laakiin halkaas ninna ma joogin. Waxa aan hadda sameyn kartaa? Weli waxaan dib u soo ceshano karaa xiriirada aan HTC EVO 4G?
Marka aad la il daran tan, waxa ugu horeeya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa joojiso isticmaalka telefoonka wax, loo dhan yahay ee diro fariimo, isagoo intaa ku daray ama bedelayaan liiska xiriirada, ka eegay Internet-ka, iwm hawlgal kasta oo ku saabsan telefoonka abuuri karaan macluumaadka cusub, iyo xogta cusub overwrite karo xiriirada aad la tirtiro, iyaga unrecoverable. In eray, waxaad sii telefoonka ee saldhigga marka aad badiyay xiriir ah. Markaas ka heli qalab kabashada in ay dib u hesho sida ugu dhaqsaha badan ah.
Marka laga hadlayo qalab dib u soo kabashada, inaad si fiican u soo qaado lahaa mid la isku hallayn si loo ilaaliyo xogta aad. Haddii aadan haysan wax fikrad ah, waxaad isku dayi kartaa Wondershare Dr.Fone for Android (Android Data Recovery) , taas oo lagu kalsoonaan karo oo wax ku ool ah. Waxay ka dhigaysa mid u fudud super inuu ka soo kabsado xiriirada HTC EVO 4G. In qasabno yar, si aad u your computer soo ceshano karo xiriirada aad laga badiyay, ka dibna iyaga dajiyaan in aad telefoon effortlessly.
Dhadkan badan, Wondershare Dr.Fone for Android awood u kabsaday fariimaha, sawiro, videos, audio iyo dokumentiyo kala duwan ee telefoonada kala duwan Android iyo kiniiniyada. Next, aynu hubiyo sida dib u soo ceshano xiriirada tirtiray ee HTC EVO 4G in tallaabooyinka.
Tallaabada 1. Isku aad HTC EVO 4G in computer ah
Ku rakib oo ay maamulaan Wondershare Dr.Fone for Android on your computer, ka dibna xiriiriyaan HTC EVO 4G. Markaas waa in aad arki suuqa kala barnaamijka ee sida soo socota.
Haddii uu furmo suuqa barnaamijka ayaa muujinaya sida hoos ku qoran. aad u baahan tahay si ay awood debugging USB ah ee aad taleefan hore, u tag Settings , hoos u dhaqaaq fursadaha Developer , sax debugging USB . Hadda, aad telefoonka waa in hab debugging USB, oo aad u guuri kartaa si tallaabada xigta.
Tallaabada 2. Sawirka aad telefoon hadda
Marka aad telefoon waxa lagu ogaan karaa Wondershare Dr.Fone for Android, waxa la joogaa wakhtigii si ay u iskaan oo ay helaan xiriirada aad laga badiyay. Marka hore, hubi batteriga aad telefoonka ee waa 20% eedeeyay yaraan. Markaas riix Start si ay u bilaabaan. In dhowr ilbiriqsi, barnaamijka idin xusuusin doonaa inuu u jeesto aad telefoon oo guji ogolow dhisayaa shaashad aad telefoonka ee. Just u wanaagsan oo aad ka baareyso telefoonka.
Tallaabada 3. ceshano xiriirada HTC EVO 4G si aad u computer
Waqtiga iskaanka ku xiran tahay qadarka xogta ku kaydsan telefoonka. Guud ahaan, waxa aad ku dhaafi doontaa dhowr daqiiqo. Ka dib markii in, Wondershare Dr.Fone for Android soo saari doonaan natiijo baaritaan aad u. Doorashada xidhiidho category dhinaca bidix ee suuqa, waxaad ka akhrisan kartaa warbixin ku xiriir oo dhan. Sax off kuwa aad rabto oo guji Ladnaansho iyaga badbaadiya on your computer.
Fiiro gaar ah: The xiriirada badbaadiyey noqon kartaa .html, .csv iyo files .vcf on your computer. Haddii aad u baahan tahay, waxaad isticmaali kartaa qalab Tababaraha Android inay file wuxuu saaray telefoonka dib.